Date My Pet » Member Safety Redu Top Pokutanga
Last updated: Oct. 25 2020 | 2 Maminitsi verenga
Online kuchengeteka iri nechemberi dzedu nguva dzose, saka isu taida kukuyeuchidza zvose zvatinoita kuti tirambe nhengo dzedu vakachengeteka uye chokwadi kuti tiri vakaita pakupa iwe pamwe zvikuru inobvira paIndaneti kufambidzana ruzivo.
Vanopedzisira indasitiri-kutungamirira Anti-Scammer rwokugadzira
Scammer dzokubvisa kuva yepamusoro uye kuwedzera kuoma kusvibisa. Asi tiri kuita zvose zvatinogona kuti tirambe navo kure.
Tave vachishandisa Anti-Scammer rwokugadzira Scamalytics nokuda 2 makore ikozvino. The turusi migove Scammer Data mhiri paIndaneti zvokufambidzana indasitiri uye kunobatsira chikwata yedu yakadzidziswa Moderators gwapa all scammers uye avabvise DateMyPet.com vasati kunyange kukanganisa nhengo dzedu. Scamalytics uyewo car-anoona all scammers uye anobvisa bots, uyewo kupa chikwata hwedu 'pasi Hood' mashoko chisingaoneki kuvanhu ziso.
Vakabata ruzivo urwu, chikwata chedu vatengi vanoiswa nani kusvibisa Scammer dzinokura kuvabvisa nokukurumidza.
Kuramba kudzidziswa yedu zvikwata vatengi
Tiri mumwe chete nemakambani ari bhizimisi pamwe pachake-imba chikwata chedu vatengi, vakazvitsaurira nhengo rutsigiro zvikwata kuti nomwero uye mutengi kutarisirwa. chikwata Yedu 60 basa 24 maawa pazuva, mazuva manomwe pavhiki, 365 Mazuva pagore kugovera mu-nguva-zone uchenjerere nhengo dzedu pasi rose.
Tinoita nguva dzose uye kuramba mutengi chakabatikana dzidzo, aiming kungoramba kuvandudza mabasa edu uye nechokwadi pangozi nhengo dzedu.
Fast mwero nguva
Yedu yakadzidziswa mwero chikwata chidzitiro zvose User-vanowanika tigutsikane kuzosimbisa Profiles pasi vari zvechokwadi. Izvi zvinosanganisira kuongorora mifananidzo, Profiles, dhayari Entries, mavhidhiyo uye kutanga voga mashoko nechokwadi nhengo Kukodzera dzekuziva zvakasangana nokuti nomumwe nzvimbo kana samambure.
Kuti tirambe mwero nguva pasi kufadza 10 miniti chipfuro, Unyoro chikwata kwedu vane zvakajeka maonero aidiwa nguva saka vanogona kuona mashandiro avo kumarudzi kusuduruka yavo. Nemwero nguva dziri Parizvino pane anoyevedza 7.5 maminitsi!
Dating varairidzi kupa rutsigiro uye mazano
Uyewo pakupa yepamusoro mutengi uchenjerere vanoshandisa edu ose, chikwata kwedu ave nomumwe munhu matiroko, nokubatsira nhengo vanotambura pamwe hwokugadzira chinoumba kana vasina ruzivo paIndaneti daters kuti rinyatsomubatsira avo kufambidzana ruzivo.
Mutengi kutarisirwa chikwata kupa mazano sei kuti pave Profile kuti inowana nemigumisiro yakanaka, sei kugara vakachengeteka uye chii kutarisira kana kudanana paIndaneti.
5 Tips To Ingapukunyuka Long Distance Relationship – Student Edition